‘म जन्मजात काङ्ग्रेसलाई जबरजस्ती एमाले बनाउन खोजे’ – Kanika Khabar
‘म जन्मजात काङ्ग्रेसलाई जबरजस्ती एमाले बनाउन खोजे’
Kanika Khabar २४ बैशाख २०७९, शनिबार १०:३३ May 7, 2022 मा प्रकाशित
वैशाख २४, दाङ ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ६ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । यो अवधि निर्वाचनका लागि निकै संवेदनशील मानिन्छ । भोट खरिद गर्ने देखि धम्कीसम्मका काम हुने गर्दछन् । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ भैसकुर्मामा नेपाली काङ्ग्रेसका एक कार्यकर्तालाई जबरजस्ती एमाले बनाउन खोजेको खबर बाहिरिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस वडा नं. ३ का इकाइ सभापति शरद बुढाथोकीले गाउँका साथीले एमालेको कार्यक्रममा बोलाएर लगेको र उपमहानगरपालिकाका एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार नरुलाल चौधरीले टिका लगाएर एमालेमा प्रवेश गराएको बताए । भैसकुर्माका जलविर चौधरीलाई एमालेमा प्रवेश गराएको अनर्गल प्रचारप्रसार गरेको बुढाथोकीले बताए ।
‘मलाई गाउँका एक जनाले कार्यक्रममा जाऔँ भनेर लग्नुभयो । कार्यक्रममा नरुलालजीले अगाडि बोलाएर टिका लगाइदिनुभयो । एमालेमा प्रवेश गरेको भनी घोषणा गरियो । तर मैले म जन्मजात काङ्ग्रेस हुँ र एमाले हुँदैन भनेँ, म काङ्ग्रेस भन्दा अरु पार्टी हुँदेन भने ।’ जलवीरले थपे , ‘मलाई जबरजस्ती एमाले बनाउन खोजे । १२ दिन अगाडि मलाई पैसाको प्रलोभन समेत देखाएका थिए तर मैले मानेन ।’